Wednesday October 16, 2019 - 19:54:56 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa laga helay khasaaraha ciidamada Xabashida Itoobiya kasoo gaaray qaraxyo xooggan oo shalay lagula beegsaday deegaanno katirsan gobolka Baay.
sawir hore Meydka askari Itoobiyaan ah
Ilo wareedyo amni ayaa sheegaya in khasaaraha dhimashada Askarta Itoobiya kasoo gaaray qaraxyadii shalay uu tobanaan gaarayo, dad ku sugan gobolka Baay ayaa sheegay in ciidamada gummeysiga Itoobiya ay maanta jareen dhammaan isgaarsiinta magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba.
Ciidamada Itoobiya ayaa Meydad iyo dhaawacyo ka daabulay garoonka diyaaradaha magaalada Baydhabo, wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Xabashida oo jiidanaya gaadiid looga gubay qaraxyadii shalay ay maanta gelinkii dambe gaareen Baydhabo.
Habqanka Itoobiyaanka ayaa saaka aroortii ka dhaqaaqay deegaanka Mooda Moode waxayna xirteen wadada laamiga ah oo ay udiideen in ay maraan gaadiidka dadweynaha, khasaaraha ciidamada Itoobiya kasoo gaaray qaraxyadii shalay ayaa larumaysanyahay in uu ka badantahay 15 dhimasho ah iyo dhaawaca tiro intaas ka badan.
Goob joogayaal ku sugan magaalada Baydhabo waxay sheegeen in Itoobiyaanku ay xirteen dhammaan waddooyinka ku dhow saldhigyadooda waxayna saraakiisha iyo maleeshiyaadka maamulka Koonfur galbeed udiideen in ay xarumahooda u dhowaadaan waxaa sidoo kale maanta muddo saacada ah xirnaa garoonka diyaaradaha oo ay kusoo degayeen diyaarado khaas ah oo dowladda Itoobiya leedahay.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadan khasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidamada Itoobiya ee ka dhacay wadada xiriirisa magaalooyinka Baydhabo iyo Buurhakaba.